ပင်မစာမျက်နှာ အာရှဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအဖြစ်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Elite ရဲ့အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် "အဆိုပါရုရှားဘီလျံနာ"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်ယနေ့အထိသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုနောက်ခံ, ဆက်ဆံရေးဟာဘဝနှင့်များစွာသော OFF နှင့် ON- ဘောလုံးသူ့ကိုအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိချစ်ရာသခင်သည်ချယ်လ်ဆီးဘောလုံးအသင်းမှာမိမိနောက်ခံလမ်းညွှန်အင်အားသုံးအကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သည့်အဘေဇီဝအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
ချွတ်စတင်ခြင်း, သူ့အပြည့်အဝအမည်များကိုရောမ Arkadyevich အဘေဖြစ်ကြသည်။ အဘေ Saratov, ရုရှားမှာအောက်တိုဘာလ 24 ၏ 1966th ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကသူ့ဖခင် Arkady အဘေ (မှမွေးဖွားခဲ့သည်တစ်ပြည်နယ်ရုံးမန်နေဂျာ) နှင့်သူ၏မိခင်, Irina Michalenko (တစ်အိမ်အကူ).
ပေမယ့်အဘေသူဟာလူလတ်တန်းစားဂျူးမိသားစုနောက်ခံမှမွေးဖွားခံရခြင်းခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ဘဝတစ်ဦးမျှတသောစတင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသာ 18 လအရွယ်အခါကသူ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအချိန်သူ့အမိ၏သေခြင်းကိုအောက်ပါတစ်ကျဆင်းမှုကိုယူ။ လအကြာ, အဘေသူ3အသက်ခင်သူ့ကိုမိဘမဲ့ဖန်ဆင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိမိအဖေဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
မိဘနှစ်ပါးစလုံးဆုံးရှုံးမှတဆင့်နေထိုင်ခဲ့ခဲ့သူမဆိုကလေးကသာလွန်းကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်နက်နဲစိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှုသိကြပါလိမ့်မယ်။ ထိခိုက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအဘေရဲ့မိဘများ၏ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အတူမြို့သို့ရောက်လေ၏။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုရှင်းလင်းစွာသူသည်မိမိအစောပိုင်းကလေးဘဝနေ့ရက်ကာလ၌ကြံ့ကြံ့ခံသည်သူ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူ့အဖေဘက်ကဦးလေး, Leib အဘေရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်များအတွက်တာဝန်ယူဆနှင့် Ukhta, ရုရှား၏ Komi-သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အရေးပါသောစက်မှုမြို့မှသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပညာရေး
လူငယ်တို့အဘေ Ukhta ရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်း (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ) မှာစာရင်းသွင်းသည်သူ၏အသက်အရွယ်နှင့်နောက်ခံအများစုကလေးတွေကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအရွယ်တူချင်းမတူဘဲ, သူလုပ်ငန်းတစ်ခုမှေးရာပါအသိကသူ့ကိုပိုက်ဆံကချွေတာထံမှနီးပါးရှိပါသည်အကျိုးကျေးဇူးများကို၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုလုပ်သည့်ရိုရှိခဲ့ပါတယ်။
အကျိုးဆက်ကသူသည်နောက်ပိုင်းတွင်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များမော်စကိုရဲ့ဂုဏ်သတင်း Gubkin Institute မှ Ukhta ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကောလိပ်မှာမိမိပညာရေး furthering စဉ်ကလေးကစားစရာများနှင့်မျှတစွာအသုံးကားတာယာရောင်းခြင်းနှင့်အားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဤလောကသို့ ဝင်. ရှည်လျားရှေ့မှာမခံမဖြစ်ခဲ့သည်။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -စစ်မှုထမ်း
အဘေသူ 1974 အတွက်မသင်မနေရစစ်မှုထမ်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ရေးဆွဲပြီးနောက်ပညာသင်နှစ်လိုက်စားအဆုံးသတ်ထားခဲ့ရတယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်နေစဉ်, အဘေလိုက်ရှာရကျိုးနပ်မယ့်စစ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားသူကအရာရှိများမှဓာတ်ဆီတစ်ဦးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရောင်းချထွက်တင်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့ကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဗီဇအတိုင်းချပြီး၏နည်းလမ်းများကြံစည်။
အဆိုပါလုပ်ရပ်ကြီးပြင်းနှင့်အနာဂတ်ကြိုးပမ်းပိုပိုက်ဆံကယ်တင်သူ့ကို enabled ။ ဒါဟာအစနောက်ပိုင်းမှာမိမိအကံဇာတာမှစွပ်စွဲခံရမယ်လို့တရားမဝင်အစီအစဉ်များအကြားပထမဦးဆုံးမှတ်သား။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပထမဦးစွာကုမ္ပဏီ
အဘေအများအပြားတရားမဝင်အစီအစဉ်များနှင့်အတူလူဆိုးစာရင်းကြပြီမယ်နေစဉ်, သူကတော်တော်, သူ၏ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီမှာသေချာစေရန်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ် အဆိုပါနှစ်သိမ့် Co-op (ပလပ်စတစ်ကစားစရာ၏ထုတ်လုပ်သူ) တစ်ဦးဥပဒေရေးရာအခြေခံပေါ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
မိမိအကစားစရာကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှု Omsk ဒေသမှာသူ၏ပထမဦးဆုံးရေနံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတက်စတင်အပါအဝင်အခြားကြိုးပမ်းသို့စွနိုငျခဲ့သညျ။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame ရန်ထလော့
ဒါဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခွင့်အလမ်းအခါဿုံကောင်းစွာထွက်ကစားသောအခွခေံမူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါအောင်မြင်မှုဖြစ်ပျက်ကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် Mikhail Gorbachov ရဲ့ (ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဟောင်းသမ္မတ) ကို 1980s အတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အတွက်တံခါးဖွင့်လှစ်ခဲ့။ အဘေအမြတ်အကြောင်းပြချက်သည်မိမိအများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေဆိုင်ရာအောင်နေဖြင့်အခွင့်အလမ်းအတွက်ငွေကြေးနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။
အနည်းငယ်အကြာမှာသူက Berezovsky နှင့်အတူမျက်နှာသာတွေ့ရှိခဲ့ - ယခင်ရုရှားသမ္မတဟောင်း Boris Yeltsin နီးစပ်သူလင့်များနှင့်အတူတစ်ဦးစီးပွားရေးသမား။
သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးအရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်နိုင်ငံရေး outings အများအပြားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Berezovsky နှင့်အတူအဘေရဲ့ခင်မင်မှု, သူ့ကိုအစွမ်းထက်ယောက်ျားနှင့်အတူစားသောက်ဖန်ဆင်းသူ့ကိုကရင်မလင်အတွင်း၌တိုက်ခန်းလုံခြုံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများအနေဖြင့်ဝက်မွေးမြူရေးခြံများနှင့်ပင်သက်တော်စောင့်စုဆောင်းမှုအရွယ်ရှိကြောင့်အပိုဆောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှသူ့ကို enabled သော Launchpad ဖြစ်သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝနှင့်စျေးကြီးကွာရှင်း
အဘေလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပါအဝငျအခွားသူမြားနှငျ့သူ၏ဆကျဆံရေးကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမြတ်အစွန်းကိုတဦးတည်းဖြစ်၏။ သူ Olga မှပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ရေး 2,000 ရူဘယ်သူ၏မင်္ဂလာဆောင်လက်ဆောင်အဖြစ်အောင်မြင်မှုကသူ၏စတော့ရှယ်ယာတိုးချဲ့အတွက်ရုရှားဘီလျံနာများကကောငျးစှာအသုံးပွုထားခဲ့ပါတယ်, မိမိကစားစရာကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲထိုစုံတွဲ 1990 (၎င်းတို့၏လက်ထပ်ပြီးနောက်သုံးနှစ်က) တွင်ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။ အဘေလာမယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအမြတ်အစွန်းဖြစ်သက်သေပြခဲ့ပါဘူး။ သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့် (အောက်တွင်သူနှင့်အတူပုံ) တစ်ဦးလေကြောင်းအိမ်ရှင်မ, Irina လက်ထပ်တယ်။
သူတို့တစ်တွေ 23- နှစ်အရွယ်ရုရှားမော်ဒယ် Dasha Zhukova နဲ့သူ့ရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိစ္စကြောင့်ကွာရှင်းမတိုင်မီပထမဦးစွာအားလုံးခဏတစ်များအတွက်ကောင်းစွာသလိုပဲ။ သူတို့ရဲ့စျေးကြီးခွဲခြာ (တန်ဖိုးရှိ£ 155million) အဘေကသူ့5သားသမီးများ၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆုံးရှုံးခဲ့ရအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူ၏ဇနီးဟောင်းမှသူသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းခဲ့အိမ်တော် ceding ကိုမြင်တော်မူ၏။ ထို့အပြင်သူသည်သူမ၏ရန်သူ၏မြို့တော်တစ်ခုသိသိသာသာငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တဦးတည်းအားလုံးအချိန်များတွင်ကံကောင်းမရပါဘူးအဖြစ်အမှန်စင်စစ်ဘဝကို Nintendo မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါအာဏာပိုင်လူနည်းစု 2017 အတွက်သူ Dasha Zhukova (သူ၏ဒုတိယအိမ်ထောင်မင်္ဂလာ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ထိုအမျိုးသမီး) နှငျ့သူ၏ဆကျဆံရေးအဆုံးသတ်အဖြစ်စျေးကြီးကွာရှင်းများအတွက် knack ရှိပါတယ်တူသောဒါဟာသို့သော်ပုံရသည်။ $ 9B မှာတန်ဖိုးထားခဲ့သည့်၎င်းတို့၏ခွဲခြာ၏ကုန်ကျစရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးအစဉ်အဆက်, များစွာသောအညီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို, သို့သော်, တစ်ဦးသား၏ကလေးမွေးဖွားမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဒီ post ၏ထိုအချိန်က။ နည်းနည်းအဘေလာမယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအကြောင်းကိုလူသိများသည်။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -နိုင်ငံရေးပါတီများပါဝင်ပတ်သက်မှု
ရုရှား၌အစွမ်းထက်ယောက်ျားနှင့်အတူအဘေရဲ့အနီးကပ်ဆက်ဆံမှုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာ Chukotka ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Okrug ရုရှားအရှေ့ဖျားဒေသအတွက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးဒေသများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ်နိုင်ငံရေးသို့မိမိအ foray ဖန်ဆင်းတော်မူသောငယ်ရွယ်အာဏာပိုင်လူနည်းစုအပေါ်ချွတ်ပွတ်တိုက်။
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အဘေဒေသတွင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေးရလဒ်မောင်းနှင်မေတ္တာအပေါ်စတင်ခဲ့, အခြားအမှုအရာတို့ကိုအကြားတစ်ဦးပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သော 2000 အတွက် Chukotka ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်သူ၏ရွေးကောက်ပွဲလှူဒါန်းခဲ့သည်။
သူဟာသို့သော်အင်္ဂလန်၌သူ၏အဓိကဝယ်ယူချယ်လ်ဆီးအသင်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်ရန်အတွက် 2008 အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပူတင်နှင့်အတူ relationship
အဘေမူလကအကြံပြုဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ဗလာဒီမာပူတင် ထိုသမ္မတ၏ဆက်ခံအဖြစ်မှ Boris Yeltsin ။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအစဉ်အဆက်ကတည်းကပါဝါနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားအတွက်ဘုံမြေပြင်တွေ့ပြီ။
အဆိုပါနှစ်လုံးကိုပူတင်အဘေ, ပူတင်အပေါ် Abrahamovich ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများ၏အဆင့်ကိုရည်မှတ်မေးခွန်းများကိုကြီးပြင်းရာတစ်ဦးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ 1999 အတွက်ကက်ဘိနက်ရာထူးများအတွက်မီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောနိုင်အောင်နီးစပ်ခဲ့ကြသည်။
ဒီကိစ္စကိုပေါ်မှာထိုင်, တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး အဲလစ်ဇဘက် Gloster အဘေရဲ့ပူတင်အပေါ်နည်းနည်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏အဆိုအရ;
"အရာရှိများမိမိစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်ရန်မစ္စတာအဘေ enable လုပ်ဖို့ကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလေ့ကျင့်ဖို့, သူ့အုပ်ချုပ်မှုရှိမစ္စတာအဘေ manipulate ရန်အနေအထား၌ပါသောရန်တွေ့ခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းမရှိ evidential အခြေခံခဲ့ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသမ္မတပူတင်က, ဒါမှမဟုတ် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။ "
Roman Abramovich တို့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ချယ်လ်ဆီးအသင်းဝယ်ယူပြီး
သူနေဆဲ Chukotka ပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစဉ်အဘေ 2003 အတွက်ချယ်လ်ဆီးဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူ့ကိုအလိုအရ, လန်ဒန် (သူ၏ဒုတိယအိမ်က) တွင်တည်ရှိပြီးခဲ့သောထို့နောက်-ဒေဝါလီကလပ်ဝယ်ယူပျင်းတစ်ဦးထံမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမယ့်များစွာသောသူသည်မိမိလျှို့ဝှက်သဘောပေးထားရိုးသားစိတ်ရင်းခဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။
အဆိုပါအာဏာပိုင်လူနည်းစု၏လက်သို့ချယ်လ်ဆီးကိုအပ်ကြောင်းအဆိုပါသဘောတူညီမှု, 15 မိနစ်ရုရှား၌သူ၏ဒေသခံလူကြိုက်များအပြင်ဘက်ရောမသိသိသာသာကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုပေးသောအချိန်တိုအတွင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်ရှေ့သို့အစာရှောင်ခြင်း, ကလပ်အတွက်ရောမရဲ့နောက်ခံလမ်းညွှန်အင်အားသုံးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးကလပ်အသင်းတွေထဲကသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူကရိုးရိုးသားသားနဲ့အခြားအကြောင်းပြချက်များတို့တွင်ကလပ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါသူ့ကိုဦးဆောင်သောပျင်းတစ်ဦးထံမှလွတ်တွေ့ပြီပုံရသည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်နေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Roman Abramovich တို့ ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - နိုဝင်ဘာ 25၊ 2019